Faty nihantona tany Sambava :: Lehilahy voampanga ho namono ny vadiny • AoRaha
Faty nihantona tany Sambava Lehilahy voampanga ho namono ny vadiny
Tamin’ny fizahana ny razana no nahafantarana fa novonoina vao nahantona ny vehivavy iray hita faty tao an-tranony, tany Ambolomadinika Sambava, tamin’ny harivan’ny alarobia 15 jolay 2020. Ny vadin’io vehivavy io ihany no niantefan’ny ahiahy. Naiditra am-ponja vonjimaika noho izany izy, nanomboka tamin’ny zoma lasa teo. Voalaza fa nandà ny fiampangana azy ilay lehilahy saingy ny valin’ny famotorana sy fanadihadiana rehetra no nitazonana azy.
«Tsy naheno tabataba na fifamaliana sy antso vonjy ny mpifanila vodirindrina tamin’ity tokantrano ity, tamin’io harivan’ ny alarobia io. Ny havany tonga tao an-trano no nahita ny razana nihantona sy nifatotra tamin’ny tady. Notadiavina ny vadin’ilay vehivavy sady nilazana ny vaovao ratsy. Nirifatra nandositra anefa izy ka nifanenjehan’ny fokonolona”, hoy ny zandary any Sambava.
Saika niharan’ny fitsarambahoaka ilay lehilahy raha tsy tonga ara-potoana ny zandary. Nampiahiahy tanteraka kosa ny fahafatesan’ilay vehivavy noho ny fahitana faritra mangana teo amin’ny tanany sy ny tongony ary ny tendany.
“Tsy mitombina, hoy ny mpanao famotorana, ny filazana fa nananton-tena io vehivavy io, satria tsy nahitana zavatra hafa mety ho nahafahan’ilay vehivavy nanatanteraka an’izany teo akaikin’ny razana. Nitehina tamin’ ny tany ihany koa ny tongony ka ny tady nifatotra teo amin’ny tendany no mitazona azy. Mety ho nokendaina vao nahantona teo io vehivavy io”.
Ny valin’ny famotorana natao nandritra ny andro vitsivitsy avy eo, no nahafantarana fa mety ny vadiny ihany no namono an’ilay vehivavy. Voalaza fa nahatrarana ambina rongony tany amin’io lehilahy io.
Fitifirana tany Mampikony Vita fitanana an-tsoratra fotsiny ny fisian’ireo telo lahy maty
Disadisa teny Ambohimangakely :: Hofotoran’ny mpitsara ilay zandary nitifitra olona
Fikambanan-jiolahy :: Ben’ny tanàna naiditra am-ponja